KPR - Chikwata Chevarimi vemapindu - mbeu nembesa zvekutengesa
KPR ykatangwa mugore ra2000 muSlovakiya mu Europe; asi, tinopa nekutumira mbeu nembeswa pasi rose kubva gore ra 1998.
Donzvo redu ndere kubatanidza varimi vemapindu pasi rose vanofarira zvakasiyanasiyana tichiita dura rekuchengeta mbeu mbeswa (Dura rembeu ne mbesa re KPR) kubva pasi rose.
Parizvino tinowanikwa mumuzinda mitanhatu munyika dzinotevera (Slovakia, Czechia, Australia, Indiya, Thailand, South Africa ne Tanzania) pamwe nezviuru zviviri zvinoraudzira zvevatinobata navo nevaunganidzi vembeu pasi rose.
Mazuvaano tinokwanisa kuunganidza nekuwanisa ndudzi dzembesa nembeu dzinopfuura zviuru gumi zvinobva pasi rose.
Kana muine zvamunotsvaga masvika pamusha kunyangwe tisina mbesa dzese mumatura edu tirikuwedzera zuva nezuva padikipadiki mbeu nembeu mbesa nembesa.Tinovimba tichange tokwanisa kunge tiinembeu nembesa yese!
Ekutengeswa anopfuura gumi 10 000 mbeu mbesa kubvapasi rose - palms, cycads, yekunedzimwe nyikaneasingarohwe nechandozvikwenzi nemiti, succulents, carnivorous, inowaka pagore pagore, inowanika kupfura pagore, sora rekushongedzesa, muriwo, nezvimwewo.
Kupedzisira kushandurwa 18.1.2020